Avereno jerena ny 'Creepshow' Season 2 Episode 4: Miantsoantso ny Sodina / ao anatin'ny rindrin'ny hadalana - iHorror
Home Series mahatsiravina Avereno jerena ny 'Creepshow' Season 2 Episode 4: Ny horakoraka amin'ny Sodina / ao anatin'ny rindrin'ny hadalana
Series mahatsiravinaFamerenana andian-dahatsoratraShudder (andiany)Streaming Series
Avereno jerena ny 'Creepshow' Season 2 Episode 4: Ny horakoraka amin'ny Sodina / ao anatin'ny rindrin'ny hadalana
by Jacob Davison Aprily 22, 2021
nosoratan'i Jacob Davison Aprily 22, 2021
Ny herinandro lasa teo Fampisehoana mampihetsi-po namoaka ny horohoro tany amin'ny habakabaka sy ny lisea, fa amin'ity herinandro ity dia midina lalina any ambanin'ny foton'ny trano fialofana ary mihoatra ny sehatry ny fahasalamana. Miaraka amin'ny zavaboary mahafinaritra sy mahatsiravina ary mampatahotra be dia be natsangana tamin'ny fiainana tamin'ny FX mahavariana! Amin'ny lafiny maro, ireo fizarana amin'ity herinandro ity Miantsoantso ny Sodina ary Ao anatin'ny mandan'ny hadalana mahatsiaro tena mifanaraka amin'ny tany am-boalohany Fampisehoana mampihetsi-po sarimihetsika amin'ny fombany manokana.
Ny tantaranay voalohany momba ny fahavetavetana namboarina dia Miantsoantso ny Sodina, izay manaraka ny plumbera amin'ny fotoan-tsarotra antsoina hoe Linus Carruthers (Eric Edelstein, Green Room) nifanarahana tamin'ny tompon-trano mahamenatra sy tsy miraharaha Victoria Smoot (Barbara Crampton, Vadin'i Jakob) hametahana clog ao amin'ny tranobe misy trano misy azy. Hitan'i Linus irery fa misy zavatra ratsy lavitra noho ny lamba famaohana na fofona mipetaka amin'ireo fantsona antitra ao amin'ilay trano. Fihaonana amin'ny mpanofa Janet, (Selena Aduze, Matory ny Dokotera) manomboka mahatsapa izy ireo fa ny tena monster dia mety tsy ilay miharihary…
A classic Fampisehoana mampihetsi-po tantaram-pitondran-tena mahatsikaiky avy amin'ny talen'ny Joe Lynch izay nitantana ny herinandro lasa teo Ny snuff mety ary mpanoratra mahatsiravina Daniel Kraus, Miantsoantso ny Sodina manana ny zavatra rehetra mety ho tadiavinao avy amin'ny angano toy izany. Tarehin-tsoratra quirky miaraka amina mpilalao mahatalanjona, toerana mampihetsi-po, ary afon'ny zavaboary iray. Amin'ity tranga ity… Cloggy. Nentin'ny olona tsara tarehy, goavam-be ary namerenan'ny olon-tsotra ao amin'ny KNB. Ny teny dia tsy hanao ny rariny, zavatra tokony ho hitanao fotsiny izany. Mazava sy mahatsikaiky kokoa ity tantara ity noho ny fidiran'i Lynch teo aloha tamin'ny alàlan'ny slapstick sy splatstick maro rehefa nanandrana nifampiraharaha tamin'ilay biby maloto tao amin'ny fantsom-pirenenanay ireo olon-dratsy. Lynch mandefa lisitr'ireo fitaomana hafa amin'ny Letterboxd amin'ny fanaovana an'ity fizarana ity izay mametraka mazava kokoa ny zava-misy.
Eric Edelstein dia manao asa miavaka satria mipetaka eo anelanelan'ny vato sy ny toerana sarotra ny plumberantsika mania. Na tafahitsoka eo anelanelan'ny fahasimbana ara-bola sy ny vongan-tsolika iray sosona mafy. Miditra amin'ny brawl manjavozavo miaraka amin'ilay zavatra matavy avy ao anaty tatatra amin'ny lamaody izay hahatonga an'i Ashley J. Williams hirehareha. Mampiseho ny fahazotoana toy ny bandy bandy manandrana mitady karama ary miafara amin'ny fifandimbiasana amin'ny biby goavambe… sy ny zavatra ao anaty fantsona. Raha miresaka momba izany i Barbara Crampton dia mamirapiratra amin'ny mety ho andraikitry ny tena manafintohina indrindra azy: slumlord mora tezitra, mpanavakavaka, mora vidy. Victoria no karazana kilasika Fampisehoana mampihetsi-po mandady, toy ny an'ny bastard Upson Pratt sy Wilma na "Billy" ho an'ny namany. Fahavetavetana tanteraka ho an'ireo mpanofa azy, Linus, ary tsy miraharaha afa-tsy ny fanatanterahana ilay asa izy, mba hahafahany manatona haingana azy amin'ny tavoahangin'ilay chardonnay lafo vidy. Raha efa nahatsapa fahasosorana na hatezerana tamin'ny tompon-trano ianao, ho anao ity tantara ity!
Ao amin'ny tantarantsika farany, miditra lalina any amin'ny tsinain'ny tany isika ary any an-dafin'i Ao anatin'ny mandan'ny hadalana, tantaram-pahatahorana mampihoron-koditra iray an'ny Lovecraft avy amin'ny mpiambina Greg Nictotero sy mpanoratra John Esposito ary notarihin'i Tales avy any amin'ny maizina: ny sarimihetsikaJohn Harrison. Ny tantara dia manaraka lehilahy iray antsoina hoe Zeller (Drew Matthews, Ireo Arbor) nigadra noho ny famonoana olona ary nitafatafa tamin'ny mpisolovava mpisolo toerana azy, Tara Cartright (Brittany Smith, poizina) momba ireo zava-nitranga niseho tao amin'ny toeram-pivarotana miafina tany amin'ny tendrombohitra feno lanezy. Zeller dia tao anatin'ny ekipa nanao fikarohana niaraka tamin'i Doctor Trollenberg (Denise Crosby, Pet Sematary) izay mety namoaka ratsy tsy hay lazaina izay nisafidy ny mpiasa. Saingy tena izy, sa tena resin'ny hadalana i Zeller?
Fiovana hafa mahafinaritra hafainganam-pandeha ho an'ny Fampisehoana mampihetsi-po, indrindra eo amin'ny sehatry ny horohoron-tany sy ara-tsaina. Azonao atao ny milaza fa i Nicotero sy i Esposito dia te-hitantara ny tantaran'izy ireo tamin'ireny fomban-javatra ireny teo am-pamoronana zava-baovao, ary nanao asa tsara izy ireo tamin'ny fampifangaroana ireo tropika sy faritany. Ny antsipiriany sasany dia takiana amin'ny famerenana mijery mba hahalalana tsara kokoa, fa amin'ny ankamaroany dia angano matevina sy trippy izy io. Rehefa manomboka mifamely ny olombelona ary miala tanteraka ny fifampatokisana dia lasa mampihoron-koditra izy ireo, raha tsy mihoatra ny zavatra mipetraka ao anaty rindrina.
Manana simia mendrika i Matthews sy i Cartright rehefa nandinika izay tena niseho tao amin'ilay toerana izy ireo sy ny hevitr'izy ireo momba ny fomba hirosoana amin'ny raharaham-pitsarana. Crosby dia mamirapiratra toy ny dokotera Trollenberg mety ho adala satria ny fahamarinan'ny andrana nataony dia mivoaka amin'ny fomba maro noho ny iray, mifampitady azy sy Zoller. Toy ny mahazatra, FX malaza sy azo ampiharina ambony indrindra avy amin'ny KNB. Manantenà tentacles sy zavatra maro avy any ankoatr'izay.
Olana iray hafa matanjaka amin'ny Fampisehoana mampihetsi-po, ary amin'ny fizarana roa tavela amin'ity vanim-potoana ity dia azoko an-tsaina fotsiny izay havoakany amin'ny manaraka!
Fampisehoana mampihetsi-po mandefa fizarana vaovao isaky ny Alakamisy ao amin'ny Shudder.
2021barbara cramptonFampisehoana mampihetsi-pohorohoroJoe LynchReviewmangovitraStreaming
Ankafizo ny Savage fito minitra voalohan'ny 'Mortal Kombat' Eto, Amin'izao fotoana izao
'Mortal Kombat' dia manome fandresena tsy misy antony
'The Watcher' avy amin'i Ryan Murphy dia manome an'i Naomi Watts, ...
Teizera 'Jereo' Teaser 2, mametraka daty premiere ...
'RATSY RESIDENT: haizina tsy manam-petra' dia mitete amin'ny sehatra fanokafana famonoana pulse
Blumhouse dia niaro ny zon'ny 'Battersea ...
'Ny tantaran'i Lisey' dia andian-tantara mahafinaritra sy malefaka izay ...
'Ratsy' dia nilatsaka mpanazatra fizarana 2 mialoha ny ...
Jenna Ortega dia nandray ny lohateny ...
Ratsy toetra ny RESIDENT: Darkness tsy manam-petra 'miaraka amin'ny mombamomba ny toetra!